ဓမ္မာရုံနဲ့ …အိပ်ပျက်ညများ။။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဓမ္မာရုံနဲ့ …အိပ်ပျက်ညများ။။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Aug 4, 2011 in Arts & Humanities | 17 comments
မြန်မာလူမျိုးများဟာ သီလ ဘာဝနာကိုသာ မပွားနိုင်ရင်နေရမယ်
အလှူဒါန နဲ့ ပါတ်သက်လို့ကတော့ သိပ် များများ ပြောစရာ ဟောစရာမလို ပါဘူး
အလှူ ရေစက်လက်နဲမကွာဆိုသလို …. လို့ ပြောရမယ်ဗျ ““သာဓုပါ သာဓုပါ”” ဆိုပြီး
အသံချဲစက်သံ ကြားတာနဲ့ ငါးဆယ် တစ်ရာကတော့ လှူ သွားကြတာပါပဲ အလှူ ခံရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းသာမသိရင်နေမယ်
တရား သီချင်းခွေလေးနောက်ခံဖွင့်ပြီး ဖလားတစ်လုံးရှေမှာချထားရင် အခံလှူထည့်သွားရမယ်လို့ သိနေကြပြီးသားပါ
နည်းတာများတာ ပဒါန မထား ညောင်စေ့လောက်လှူသော်လည်း ညောင်ပင်ကြီးလောက်အကျိုးများတတ်တယ်လို့
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာတော့ ဓမ္မာရုံများဟာမရှိမဖြစ် နိဗ္ပာန်ကိုသွားမယ့် ပထမလှေကားထစ်တွေလို
ရှိနေခဲ့ကြတာ ပါပဲ…. ကိုယ့်ရပ်ကွက် မှာဓမ္မာရုံတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ရင် ကိုယ်ပဲ ရပ်ကွက်သားတွေအနေနဲ့ အလှူအတန်းလုပ်ရာ
မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရပ်ကွက်စုပေါင်း အလှူလုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုအိမ်မှာ အလှူလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူများရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံသွားပြီး
စားပွဲခုံကုလားထိုင် ပန်းကန်ခွက်ယောက် တွေပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင် လက်ဖက်စားတဲ့ဇွန်းကအစ ငှားလို့ရတာပါပဲ
ကိုယ့်ရပ်ကွက် ကိုယ့်ဓမ္မာရုံနဲဆိုတော့ မျက်ငှာ ငယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့…အလှူလေးအတန်းလေးရှိလို့ အသံချဲစက် ငှားရမယ်ဆိုလဲ
ကိုယ့် ဓမ္မာရုံမှာပဲ အလှူငွေလေးထည့် ငှားလိုက်ရုံပါပဲ တစ်ချို ရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံများဆို ၀တ်အသင်းလေးတွေဖွဲပြီး အလှူတွေအတန်းတွေမှာ
လိုက်ဝတ်ရွတ် ..ဓမ္မာရုံမှာ အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ တစ်ရားပွဲတွေလုပ်ရင်ဝိုင်းကူညီ အိမ်းတွေမှာလုပ်ရင်လည်း ၀တ်အသင်းသားတွေက
လိုလေးသေးမရှိ အစအဆုံးကူညီကြတာကလား…ဒါလေးတွေဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ ချစ်စရာဓမ္မာရုံလေးတွေပါပဲ.. ။။။
လူတွေဟာတစ်စတစ်စ နဲ့ ဓမ္မာရုံတွေကိုရှောင်လာကြတယ် ဓမ္မာရုံနဲ့ လူနေအိမ်နဲ့ ဝေးဝေးကိုရှာပြီးနေထိုင်လာကြတယ်
ရပ်ကွက် ထဲ အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဓမ္မာရုံနဲ့ နီးရင် မ၀ယ်ချင်ကြတော့ဘူး ဒါကိုကျွန်တော်လည်းအစက သိပ်နားမလည်ခဲ့ဘူးဗျ
လူတွေဟာ ရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံနဲ ဝေးရာမှာနေချင်ကြတာပါပဲ …။။အဲဒီမေးခွန်းကို….ကိုတိုင် အိမ်ပိုင်ဝယ်လိုက်တော့မှ ပြန်ဖြေစရာ
အဖြေကို ထင်ထင်ရှားရှားသိလာရတော့တာပါပဲ…အဖြေကိုမပြောခင် ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့ ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံ ဒုက္ခ လေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ အိမ်နဲ့မနီး မဝေးမှာ ဓမ္မာရုံ ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ ကိုနိုင်ရာ ငွေးကြေးလေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်တစ်လုံးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ
ဈေး /ကျောင်း/ ကားမှတ်တိုင် /ဆိုက်ကားဂိတ် စသည်တို့နဲ နီးတဲ့ နေရာများဟာ အိမ်ဈေးမြေဈေး အလွန်ကြီးမြင့် လှတာကြောင့်
တော်ရိရော်ရိ နေရာလေးမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တောင် ရန်ကုန် မြို့က အိမ်သေးသေးလေးတစ်လုံးဟာ သာမာန်လူလက်လှမ်း မမှီနိုင်ပါဘူး
ကျွန်တော် ကတော့ ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလား ကံဆိုးတယ်ပဲပြောရမလား အဲဒီလိုနေရာတွေနဲ့နီးတဲ့ နေရာလေးမှာ အိမ်လေးတစ်လုံးကို
ဈေးသက်သက်သာသာနဲ ၀ယ်ယူလိုက်နိုင်တာပါပဲ ဈေး /ကျောင်း/ ကားမှတ်တိုင် /ဆိုက်ကားဂိတ် တွေ နီးတဲ့ အပြင် အဆစ်ရလိုက်တဲ့နီးစပ်မှုက
ရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံကြီးနဲပါ နီးစပ်နေတာပါပဲ….
စတင်ပြောင်းလာကာစတော့ အစစ အဆင်ပြေနေခဲ့လို့ ကိုယ်ရဲရွေးချယ်ဝယ်ယူမှု မှန်ကန်ခဲ့လို့ ကြိတ်ပြီးပီတိဖြစ်မိသား
အဲဒီပီတိတွေကို တစ်နေ့မှာတော့ စတင် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပါတော့တယ်…
တစ်နေ့တော့ ကိုယ့်အလုပ်နဲကိုယ် ည နှစ်နာရီကျော်မှ အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး လူချေတိတ်ချိန်မို့ ရေမချိုးတော့ ပဲ ခြေလက်ဆေး
တစ်နေ့တာပင်ပန်းခဲသမျှ ညနှစ်နာရီ ကျမှ စတင်အနားယူအိပ်စက်ခွင့်ရပါတော့တယ် မနက်လဲ ခြောက်နာရီခွဲအမှီ ရုံးတက်ရ မှာဆိုတော့
အိမ်ပျော်အောင်မြန်မြန်အိပ်လိုက် ပါတော့တယ်…..အိပ်လို့မှကောင်းတုန်းရှိသေးတယ် ဗျာ ဓမ္မာရုံကဖွင့်လိုက်တဲ့ ကျယ်လောင်တဲ့
အသံချဲစက်သံကြောင့် လန်နိုးလာခဲ့ပါတယ် လူကတစ်အားအိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေပြီး အသံချဲစက်သံကလည်းကျယ်လောင်လှတာကြောင့်
မိုးလင်းပြီအထင်နဲ့ နံရံကနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ အောင်မလေး လေးနာခွဲ သာရှိပါသေးတယ် အိပ်ရေးပျက်ထားတဲ့ သူမို့လို့
စိတ်လည်းတော်တော် ကိုယ့် စိတ်တို သွားပါတယ် ..““ ဒီ ဓမ္မာရုံကလဲကွာ မနက်မိုးတောင်မလင်းသေးဘူး အကုသိုလ်ပေးနေတယ်””
စိတ်ထဲ ကပြောလိုက်မိတာပါ ဒီလို ကျယ်လောင်တဲ့အသံနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှဆက်အိပ်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး
ထမျက်နှာသစ်ပြီးတော့ ဓမ္မာရုံရဲ့တေးသံသာကို ဆက်လက်နားထောင်မိပါတယ်….
ပထမအိပ်ယာကလန့်နိုးစေတဲ ရေကင်း တေးသံ အဲဒါပြီးသွားတော့ အလှူခံ လူကြီးရဲ ဘုရားရှစ်ခိုးနဲ့ မေတ္တာ ပို့ အမျှဝေသံ
အဲဒီအသံတွေဆုံးတာနဲ အလှူခံတော့တာပါပဲခင်ဗျာ..သူစတင်အလှူခံတဲ့အချိန်က မနက် လေးနာရီ လေးဆယ်ငါးမိနစ်
ဘယ်အလှူရှင်တွေ လမ်းပေါ်ထွက်နေလို့ပါလဲ ဒီလောက်မနက်စောစော လမ်းမမှာလူဘယ်လောက်ရှိနေမှာမို့ အလှူခံနေတာပါလဲ
အလှူငွေကော မနက်အစောကြီးဘယ်လောက်ရမှာမို့လဲ ….။။
အလှူခံ တစ်ခုအနေနဲ့ မနက် ခြောက်နာရီလောက်စတင်အလှူခံရင်ကို အနီးနားနေတဲ့လူတွေနဲ့ အလှူခံအတွက်
တစ်နေ့လုံး အလှူခံနိုင်တဲ့အပြင် အိပ်ရေးပျက်ကြတဲ့ ၀န်ထမ်း လက်လုပ်လက်စားသမားတွေ အတွက်
စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်မှာမဟုတ်ကြပါဘူး …..။။။။
ဒါပေမယ် အလှူခံလူကြီးရဲ့ ၀ိရိယကောင်းမှုကြောင့်
ကျွန်တော်တို့လိုညဉ့် နက်ထိ အလုပ်ဆင်းပြီးမှ မနက်စောစော ထအလုပ်သွားရမယ်သူတွေကိုတော့ ..ဒုက္ခပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါပြီ
ကျွန်တော်တို့တင်မဟုတ်ပါဘူး နံနက်စောစော အိပ်ယာထလေ့မရှိတဲ့လူတွေကို လဲ အိပ်ရေးပျက်စေပါတော့တယ်..
အဲဒီနေ့ကစပြီး ချစ်စရာဓမ္မာရုံရဲ့ ဒုက္ခပေးမှုကိုမနက်တိုင်းခံစားရပါတော့တယ် …….
ပုံမှန်အိပ်ယာထနေကျ မဟုတ်တဲအချိန်မှာနေ့စဉ်လိုလို အလန့်တစ်ကြားထထနိုးနေရတာဟာ ဓမ္မာရုံရဲ..ဒုက္ခပါပဲ
တစ်ခါတစ်လေများအလှူခံသံမကြားရဘဲနဲ့ ရေကင်းတီးလုံး သံ ကိုပဲ အကျယ်ကြီးထဖွင့်ရင်ဖွင့်တတ်ပါတယ်
တစ်ခါတစ်လေတော့လဲခေါင်းအုံးနှစ်လုံကို နားမှာပိတ်ပြီး အတင်းအိပ်ကြည့်ပါတယ် ဘယ်လိုမှ ဓမ္မာရုံရဲ အသံချဲစက်သံကို
တစ်နေ့တော့ ညဉ်နက်မှအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအိပ်ရေးပျက်ပျက်နဲ့ အိပ်နေတဲ့အချိန်
ဓမ္မာရုံရဲ့  အသံချဲစက်သံကြောင့် လန့်နိုးလာပြီး နာရီကြည့်လိုက်တော့ လေးနာရီ….အိပ်ရေးပျက်ပျက်နဲ့ ဒေါသအရမ်းထွက်သွားမိတယ်
ဒီ အလှူခံ လူကြီးတော်တော်လွန်သွားပြီး…စိတ်မထိမ်းနိုင်ပဲ တံခါးဖွင့် ကာ ဓမ္မာရုံဘက်ကိုပြေးထွက်လာမိပါတယ်
လမ်းမှာတွေ့ တဲ့ အုန်နီခဲပိုင်းကျိုးတစ်လုံးကိုလဲ ကောက်ယူခဲ့ပါတယ် ဓမ္မာရုံအနီးကိုရောက်တဲ့အခါအမှာတော့ လော်စပီကာ
တင်ထားရာဓမ္မာရုံခေါင်မိုးကို အုပ်နီခဲနဲ့ထုမယ်လို့ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ချက်ချင်အသိစိတ်ကပြန်ဝင်လာပါတယ် အော် ငါ အကုသိုလ်
ဖြစ်တော့မှာပါလားလို့ပေါ့.. ခဲကို ပြစ်ချခဲ့ပြီးအိပ်ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်….။။။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီ ဓမ္မာရုံကြီးရဲ့ ပြုပြင်နေတဲ့ တိုင်တစ်လုံးစာလိုနေတဲ့အလှူငွေအတွက် မြန်မြန်အလှူခံပြည်ပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းရတာကအမောပါပဲ
ဆုတောင်းရုံတင်မကဘူးတစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တိုင် ငါးရာတစ်ထောင် အလှူသွားထည့်နဲ့ ဒီအလှူငွေမြန်မြန်ပြည့်မှ
ဒီအသံချဲစက်နဲ့ စောစောစီးစီး ထအော်တဲ့အသံကြီးပျောက်သွားမှာလေ ဒါမှအိပ်ရေး၀၀အိပ်ရမှာပါ…
ကျွန်တော့မှာ တိုင်တစ်လုံးစာအလှူငွေပြည်ရေးကို ဓမ္မာရုံဂေါပက တွေထက်တောင် စိတ်အားထက်သန်ပါသေးတယ်။။။။။
ဒီလိုနဲ့ ဓမ္မာရုံ ဒုက္ခကိုတစ်လကျော်ကျော်လောက်ခံစားပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ စာရင်းရှင်းတမ်းကို အသံချဲစက်ကြီးနဲ့
ရှင်းလင်းပြီး ပြုပြင်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာ အလှူ ရှင်တွေအတွက် ရေစက်ချတဲ့ နေ့က ပျော်လိုက်တာမှလေး
ကျွန်တော့် လောက်ပျော်တဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူး…….ဓမ္မာရုံအသံချဲစက် သံကြောင့် အိပ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ညတွေအတွက်
ကောင်းကောင်းပြန် ပြီးလက်စားချေတဲ့ အနေနဲ့ အိပ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အားခဲထားတာပေါ့……။။။
ဒါပေမယ့်…နောက်တစ်နေ့ မနက်လေးနာရီမှာ ကျွန်တော်လန့်နိူးလာခဲ့ရပါတယ်…..
ဟုတ်ပါတယ် ဓမ္မာရုံလူကြီးရဲ့ ကြေငြာလိုက်တဲ့ အသံကတော့ မိုးရေခံဝါဆိုသင်္ဃန်းများ အားသံဃာတော်များကို
စုပေါင်းဆက်ကပ်ကြမယ့်အလှူပွဲကြီးအတွက် အလှူခံရခြင်းပါပဲတဲ့ ခင်ဗျား…။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဒါကြောင့်အိမ်ဝယ်ကြရင် ကျန်တဲ့နေရာနဲ့ အားလုံနီးရင်နီးပါ ဓမ္မာရုံနဲ့တော့ ခပ်ဝေးဝေးဆိုပိုကောင်းပါတယ်လို့
ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးအသား နဲ့ အိုင်ဒီယာ ပဲ ကိုဘီလူး ရေ
ဒါ ဖြစ်သင့်တဲ့ အမှန် တရား တစ်ခု ပဲ
နောက်ထပ် တစ်ခု ရှိသေးတယ် ဗျ
ရန်ကုန် ၊ မန်းတလေး နဲ့ မြို့ တော်တော် များများ မှာ
အခု လို ဝါတွင်းမှာ ဦးပုသ်နေ့ မတိုင်ခင် တစ်ရက် အဖိတ်နေ့ မျိုး မှာဆို မြင်တွေ့ နိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု က
ဆိုက်ကား ၃ စီး လောက် နဲ့ အလှူခံ ထွက်ကြတာပါပဲ
ရှေ့ ဆုံး က ဆိုက်ကားပေါ်မှာ တီဗီ ရယ် ၊ ဒီဗီဒီ စက် သို့ မဟုတ် အီးဗီဒီ စက် ၊ ဒုတိယ ဆိုက်ကားပေါ်မှာ
အသံချဲ့ စက် နဲ့ ဆောင်းဘောက်စ် ၊ နောက်ဆုံးဆိုက်ကားပေါ်မှာတော့ တရုတ်မီးစက် အသေး တစ်လုံးနဲ့ 
ဖိုးဆိုချင် မယ်ဆိုချင် များ ရဲ့ ဆိုချင်ရာဆို ( မြန်မာ သံစဉ်များ အများဆုံး ဆိုပါတယ် ) တေးသံစဉ်များ ကို
ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အားရပါးရ မကြားချင် လို့ မရ ၊ ကြားမြင် ရခြင်းပါ ။ အချို့ အဆိုကျော် များ ဆိုရင် ကီးတော်တော်ကြောင်ပါတယ် ။
အခု စာရေးသူကျွန်တော် က မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ပါ
ထိုသို့ အလှူခံ မျိုး များကိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်မိပါတယ် ။ ရံဖန်ရံခါ တော့ ကိုယ့်နား မှ မြန်မြန် ကျော်သွားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အလှူငွေ ထည့်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် မြင်မိတဲ့ အမြင် က တော့
အမှန်အကန် ဆွမ်းလောင်းဖို့ အတွက် အလှူလိုက်ခံတာ ပဲ ဗျာ ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆို အလှူလိုက်ခံ ပါ ။ အနည်းအများ မဆို သဒ္ဒါရှိသလို လှူကြမယ့် သူတွေ ပါပဲ ။
ဒီလို မျိုး အများကြိုက်မှန်းမသိ မကြိုက်မှန်းမသိ ဆူညံစွာ ဆိုချင်ရာဆိုပြီး အလှူခံ နေတာမျိုးတော့ လက်သင့်မခံ ချင်ပေါင် ဗျာ ။
ကျွန်တော် ရေးခဲ့တဲ့ အလှူခံ အဖွဲ့ လိုမျိုးဆိုရင် ကြိုက်သူ လည်း ရှိမယ်
များသောအားဖြင့် …နားပူတာ တစ်ခု ထဲ နဲ့ မကြိုက်တဲ့ သူ များမယ်လို့ မြင်ပါတယ်
ကျွန်တော် လေးလေးစားစား ၊ ကြည်ညိုစွာနဲ့ အမြဲ လို လှူဖြစ်တဲ့ အဖိတ်နေ့ ဆွမ်းကြီးခံ အဖွဲ့ ရှိပါတယ်
များသောအားဖြင့် ဝတ်ဖြူစင်ကြယ် ဝတ်ထားကြပါတယ် ။ ရပ်ကွက် လူကြီး များနဲ့ ရပ်ကွက် ထဲ က လူငယ်များ စုပြီး လင်ဗန်းကြီးတွေ ၊ တောင်းကြီးတွေ ၊ အလှူခံ ဖလား တွေ နဲ့ အလှူခံ ထွက်တာပါ ။
ကြေးစည်ကြီး တစ်ခု ပါပြီး ၊ ၅ အိမ်လောက် ဖြတ် မှ တစ်ခါ ထုပါတယ် ။( အချို့ ရပ်ကွက် အဖွဲ့ များ ဆိုရင် ဗုံတို့ ဝါးလက်ခုတ် တို့ ပါ ပါပြီး တီးကြတာ သိပ်မကျယ်ပါ ။ ညင်သာပါတယ် ။ ပါးစပ် က လည်း “ ဆွမ်းကြီးလောင်းရန် အလှူခံ ပါတယ် ခင်ဗျာ ” ဆိုပြီး အလှူခံ ထွက်ပါတယ် ။
ဆွမ်းချက်ရန် ဆန် သို့ မဟုတ် ၊ ဆွမ်းဟင်းချက်ဖို့ လိုအပ်သည်များ ဝယ်နိုင်ရန် ဝတ္ထုငွေ စသည်ဖြင့် လှူနိုင်ပါတယ် ။ အမှန်တစ်ကယ် လည်း အဖိတ်နေ့ ည မှာ ဓမ္မာရုံ မှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စုပေါင်း ချက်ပြုတ်ပြီး ဦးပုသ်နေ့ မနက် ဆွမ်းခံ ကြွ ကိုယ်တော် များကို လောင်းလှူတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် အမြင်ပါ ။
ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တွေလဲ အကြီးအကျယ်ခံစားခဲ့ရဘူးတယ်။ အထူးသဖြင့်ဝါတွင်းဆိုရင် မနက်မိုးမလင်းသေး
ဘူး.။လော်စပီကာအော်သံကြီးနဲ.။ကိုယ်အချင်းချင်းစကားပြောချင်ရင်တောင်အတင်းအော်ပြောနေရတယ်။ ဒီလူတွေနားလည်မှုတော်တော်ခေါင်းပါးတယ်။ လော်စပီကာသံကိုလျှော့ထားရင်လည်းရရဲ့သားနဲ.။
အစ်ကိုတို.ေ၇းတာတွေ ဖတ်၇တာ ဗဟုသုတ၇တယ်ဗျာ
ကျွန်တော်တို.လူမျိုးအချို.ကလဲ အလှူခံနေ၇ာတွေက အသံချဲ.စက်နဲ.
ဘယ်သူကဖြင်. ဘယ်လောက်လှူပါတယ် ဘယ်ဝါကဖြင်. ဘယ်လောက်လှူပါတယ်
အဲ.လို ကိုယ်.နာမည် တပ်ပြီး ပြောတဲ. အသံကြား၇တာ ဂုဏ်ယူပုံ၇တယ်ဗျ
တိုးတိုး တိတ် အလှူခံဆို သိပ်ပြီး လှူချင်ပုံမ၇ဘူးဗျ ဒါကြောင်. ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်…………
ဓမ္မာရုံရှိသရွေ့တော့ အသံချဲ့စက်သံ ကြားနေရဦးမှာပါပဲ
ကျွန်မတို့ဘက်ကျတော့ အသံချဲ့စက်နဲ့နှိပ်စက်တာ ဓမ္မာရုံမဟုတ်ဘူး
ဘုရားပွဲရာသီဆိုရင် မဏ္ဍပ်တွေက နေ့ရောညပါ အမြဲလော်ဖွင့်ပါတယ်
တချို့မဏ္ဍပ်တွေက ရက်(ပ်)တွေ၊ ဟစ်ဟော့တွေတောင်ပါသေးတယ် (ဘုရားမဏ္ဍပ်နဲ့ ဘာဆိုင်တယ်မသိ)
ဒါကလည်း အခိုက်အတန့် တစ်နှစ်တစ်ခါဆိုတော့ တော်သေးတာပေ့ါ
hrhr, i experienced that on the past 24 year. May be It was pretty familiar to me, i didn’t see it as annoying.
Mr. Orge, you should take this one and half month asachance to practice vipassana. hrhr. goodluck with these donation announcement in future.
ဓမ္မာရုံ ကြောင့်ခံစားရတာတွေ ပြောမဆုံးနိုင်ပါဘဲ။
ဘာသာရေးကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေက သည်းခံ နိုင်ပေမဲ့
လူတိုင်းလူတိုင်း ဆူညံသံ ကို မကြိုက် ကြဘူးဆိုတာ
ဓမ္မာရုံ က လူကြီးတွေက သိဘို့ကောင်းတယ်။
အသက်ကြီးမှ အလုပ်မရှိ ရပ်ကွက်ထဲ လပ်ယားလပ်ယားတွေက
လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး မိုက် မလွှတ်ဘဲ မိုက်ခဲ လုပ်နေကြတာ။
အကောင်းဆုံးက ဓမ္မာရုံနဲ့ ဝေးတဲ့အိမ်ကို ပြောင်းပြေးကြပေါ့။
အိမ်ဘေး ဓမ္မာရုံ ရှိတာကတော့ ထားပါတော့
ဓမ္မာရုံက တရားခွေတို့ ဘုန်းကြီးတရားတို့ဖွင့်ရင်
လက်ခံနိုင်ပါရဲ့ တစ်ခါတစ်လေများ ဘယ်နှယ့် ဓမ္မာရုံက
သီချင်းတွေဖွင့်တာ နားမခံသာပါဘူး ….
ဖွင့်ပြီဆိုရင်လဲ တစ်နေကုန် ဓမ္မာရုံက အဲလိုမျိုး သီချင်းဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီး
ဘယ်သူကများ သတ်မှတ်တယ် မပြောတက်ဘူး ဒီလိုမျိုး ဓမ္မာရုံ
တော်တော်များများမှာ လုပ်ကြတယ် …..
ဘာသာရေးဆိုတော့လည်း …သွားပြောတဲ့လူ အဆိုးဖြစ်ဦးမယ် ။ တကယ်က ရှေးခေတ်ကသာ ဝေလီဝေလင်းထပြီးဆွမ်းချက်ကြလို့ … အစောကြီးနိုးနေကြတာ .. ။ အဲ့ဒီအချိန် စိတ်ကြည်လင်နေတော့ အလှူခံလျှင် ကောင်းတယ်ဆိုပြီး စွဲလာခဲ့ကြတာ ယနေ့ခေတ်ထိပါပဲ။ အခုခေတ်လည်းရောက်တော့ ဘယ်သူမှ ထမင်းဟင်းချက်ဖို့ အချိန်ပေးပြီး မီးမွှေးထင်းစိုက်စရာ မလိုတော့ဘူး … ကွန်ကာတွေ ပေါ်လာတာနဲ့ … လူတွေလည်း နှပ်ကောင်းတုန်း … လော်စပီကာ အသံက ဒုက္ခပေးတယ် ။ စည်းကမ်းလေးနဲ့ … အလှူခံတွေကို ကွပ်ကဲလျှင် ကောင်းမှာပဲ ။
မြိုကြီးပြကြီးတွေမှာ.. ည.လူသူအိပ်ချိန်မှာ.. အသံနဲ့ဆူပူခြင်မပြုရဖို့.. ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေရှိတယ်..။
ဓမ္မာရုံနဲ့ဝေးရာပြောင်းဖို့.. အိမ်ဝယ်ရင် ဓမ္မာရုံနဲ့ခပ်ဝေးဝေးဆိုပိုကောင်းပါတယ်တို့.. .စဉ်းစားတာမျိုးကလည်း.. ဖိနပ်နဲ့ခြေထောက်မတော်လို့.. ခြေထောက်ဖြတ်လှီးတာနဲ့ သဘောတရားအတူတူပဲ..။
သာသနာအရေခြုံပြီး သူတပါးအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တာက ဒီ အသံကျယ်လောင်စွာ အသံချဲ့စက်အသုံးပြုတာ တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားနေရာများလဲရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကို မပြောရဲတဲ့ခေတ်မှာ မပြောရဲတဲ့သူတွေတော့ ထားတော့..။ အခု ပြောရဲတဲ့သူတွေ ပြောရမယ့် ခေတ် ရောက်ပါပြီ။ ကိုယ့်ဘာသာကို အော့ကြောလန်ဘာသာမဖြစ်ရအောင် ကိုယ်တိုင်အချိန်မီ ၀ိုင်းပြင်ကြရမှာပါ။ ၀ိုင်းဖေါ်ထုတ် ၀ိုင်းပြောကြရမှာပါ။
သူကြီးပြောသလိုတော့ အရမ်းကြီး ရဲသွားမတိုင်နဲ့ဦးနော် ..။ အဲဒါမျိုး အရေးယူတယ်လို့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးသေးလို့ ..။
အလှူခံအတုတွေကိုလဲ စီစစ်တာ အလွန်ကိုရှားလှပါတယ်။ တိုင်တဲ့သူရှိပါမှ မကောင်းတတ်လို့ မေးမြန်းအရေးယူတာပဲ ကြားဘူးပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ရဲကရော၊ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တွေကရော ၊ နီးစပ်ရာ မဟန အဖွဲ့ဝင်ဘုန်းကြီးတွေကပါ လိမ်နေမှန်းသိသိကြီးနဲ့ ကြည့်နေတာပဲများပါတယ်။
(ဖိနပ်နဲ့ခြေထောက်မတော်လို့.. ခြေထောက်ဖြတ်လှီးတာနဲ့ သဘောတရားအတူတူပဲ..။)
လူတွေက အရိုးစွဲနေကြတော့ ကိုယ်နိုင်ရာကိုပဲ လှီးဖြတ်ကြရတာပဲ။
parlayar46 ကို ထောက်ခံပါတယ်။ အရင်ကတော့ အလှူခံ အတုမှန်း အစစ်မှန်း သေသေချာချာ မစိစစ်ပဲ လှူတတ်ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ (ရွာထဲမှာနေပြီး အမြင်ကျယ်လာလို့) နိဗ္ဗာန ပစ္စယော ဟောတု ဆိုပြီး အလှူတော့ဘူး။ ကိုယ်လှူလိုက်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမလဲ စဉ်းစားပြီးမှပဲ လှူတော့တယ်။
ကျမတို့နားက ဓမ္မာရုံကတော့ လော်စပီကာ ၄ လုံးကို အရပ် ၄ မျက်နှာ လှည့်ထားပါတယ်…အဖိတ်နေ့နဲ့ ဥပုသ်နေ့တွေဆို မနက် လေးနာရီကတည်းက ဘွန်တော ….အစချီလို့ ဆွမ်းချက်ရန် ထတော်မူပါ…ပြီးရင် ဆွမ်းချက်ရင်းနားဆင်ဖို့ ဆိုပြီး သီချင်းတွေ ဖွင့်လိုက်တာ..မိုးစင်စင်လင်းတော့လဲ မရပ်ပါဘူး…အလှူခံလို.ရတဲ့ စာရင်းကို ထပ်ခါ တလဲလဲ ရွတ်…တခါတခါများဆို ဓမ္မ္မာရုံကလူတွေ ရယ်မောနေကြတဲ့ အသံတွေတောင် လော်ကနေ လျှံထွက်လာသေးတယ်..ဒါက အိမ်နားက ဓမ္မာရုံ..
ကျမအလုပ်ကလဲ ဓမ္မာရုံနဲ့ ဘေးချင်းကပ်ရပ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့…
ဗညားဟန် နဲ့ စိုးစန္ဒာထွန်းဆို မကြားချင်မှ အဆုံးပဲ….
That is one of the enviornmental pollution. As you know, “No Horn Zone” that is.Noise pollution makes the mental pressure or stress to us. Stress damages the health of both of body and soul.The basic feature of every religiuos is “kindly love” or kindness. These above matters are so far from kindness. I am worrying about the misway of Buddhism. Other religious persons may complaint these above matters more, because, even we, buddhist, cannot accept these matters.
အိမ်နားမှာ ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံရှိတယ် .. ၀ါတွင်း ဆွမ်းလောင်း ရှိတယ် ..
ဆွမ်းလောင်းတဲ့ မနက်ဆိုရင် ၄နာရီလောက်ကတည်းက အသံချဲ့စက် ဖွင့်ပါတယ် ..
နောက်ပိုင်းကျတော့ used to ဖြစ်သွားလို့လားမသိ သိပ် သတိမထားမိတော့ဘူး
တခါက အညာဆန် သင်္ဘောနဲ့ ခရီးရှည် သွားဖူးတယ် .. သင်္ဘောက ည ဆိုရင် ကမ်းကပ်ပြီး ရပ်တယ် မနက်မှ ထွက်တယ် .. ညဖက်မှာ ရေတင်ဖို့ မီးဖွင့်ဖို့ စက် မောင်းထားတယ် .. ပထမ ၂ ရက်လောက်တော့ အိပ်ရခက်တာပေါ့ .. နောက်တော့လဲ နေသားကျသွားတယ် ..
ဒီတော့ စိတ်ထဲမှာ ကုသိုလ်ရေးလို့ပဲ သဘောထားခဲ့ရင် ..
(အလှူခံ မဏ္ဍပ်ကတော့ တမျိုးပေါ့)
ဓမ္မာရုံ ကအသံချဲ့စက်သံ နားမခံနိုင်လို့ အလှူငွေထည့်တာ၊ ဓမ္မာရုံနဲ့ ဝေးဝေးမှာ နေဖို့ကြိုးစားတာ နည်းမမှန်ပါဘူး။ ဓမ္မာရုံက ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူချင်းဆို ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းပြီး နားချတာကောင်းတယ်။
ပြောသာပြောရတာ၊ အသိတရားမရှိတဲ့သူကတော့ ပြောလည်း သိဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ရဲတိုင်တာပဲကောင်းတယ်။
ဖျက်ရမဲ့ အစဉ်အလာထဲမှာ အဲဒါပါတယ်ဗျ…။ အလှူ ဒါန ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဘာသာရေး ခြံခတ်ခံရခြင်း တစ်မျိုးပဲ..။ အဲဒါမျိုးတွေ များနေရင် တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူး..။